Iva Confident In Smile Your uye White Mazino | Nzira Yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide
Vanhu vakawanda vanoshuva mazino avo akanga chena. Kune siyana nezviito zvaungaita nechokwadi mazino ako haazotsauki tsvuku dzakaita. Pane nzira kuzvichenesa zvikadaro mazino ako chena zvakare. Nyaya Izvi zvinosanganisira mazano akasiyana nokuda kuwana imi mazino machena uye nokuzvichengeta chena.
Iva nechokwadi mazino ako akanyatsokopwa kucheneswa asati kushandisa musha zviitwe kwemeno poda. Mazino rakanga rachena zvinogadzirwa zvichava yakawanda dai ukashandisa navo zvachose akachena teeth.If mazino enyu haana kugeza kana iwe kuzvichenesa zvikadaro asati kwokugeza mazino ipapo migumisiro vachava gogonera shading.
Munhu wose anoziva kuti Citrus zvibereko, akafanana maranjisi kana Lemons, akapfuma vhitamini C, asi havana uchiziva vanogona kuita imi mazino akachena? Unogona kunyange kushandisa remoni svuura kana orenji, zvose zvaunazvo kuita chokuzora pemvura mazino enyu pamusoro musana chikamu, izvo zvinoita kuvaima. Nokuisa zvishoma munyu pamusoro svuura ari remoni kana orenji, magumisiro dzingagona kunatsiridzwa.
Chinhu chokutanga chinokosha kana kuedza kuchengeta mazino ako chena iri cleanings unyanzvi. Get mazino enyu vakachenesa mwedzi mitanhatu ose uye nguva dzose kuronga kugadzwa wauchazoroorana kana uri panguva yako kuchenesa kuitika.
zvigadzirwa izvi zvine makemikari chidodzi mazino ako. The bhuracha wacho roughness ndizvo zvinoita chokwadi mazino ako akachena.
Kana kunwa mushaba, tii, kofi kana waini rima, sveta mvura uyewo. zvasviba izvi zvinwiwa kuchaita chidodzi mazino ako, kunyanya kana vapera nguva dzose. Swishing sips dzemvura kumativi mumuromo mako pakati sips pamusoro hwahwa izvi zvinogona kubatsira kubvisa chero vakasara kuti kwaigona kuguma staining. Pashure unoparadza zvinwiwa izvi, yeuka kukwesha mazino enyu nekukurumidza.
A zvishoma ichaziva nzira yokuwana mazino ako whitest yavo kushandisa zvimwe zvibereko. A nemudzimai mienzaniso yakanakisisa zvibereko zvinogona kuzvichenesa zvikadaro meno maranjisi uye maranjisi. Munogonawo chokuzora munhu orenji svuura pamusoro pemvura mazino ako kuti kuzvichenesa zvikadaro.
Kutakura maduku chikwesheso kuti unogona kushandisa pashure kudya shuga. zvokudya izvi zvinhu kunamatira mazino ako nyore, uye kutanga staining muitiro kana kuwedzera kwairi. Pashure anokubatai imi zvinozipa, kanguva kukwesha. Mushonga wemazino harudikanwi kana kusuka mazino ako uye ipapo sukurudza navo zvakanaka.
korona dzenyu haazombofi kuzvichenesa zvikadaro sevamwe mazino ako. korona yako icharamba zvakafanana mazino ako kuwana akachena. Izvi zvaigona kuita korona dzibude kunyange kupfuura kare.
Unofanira kudzivisa kuva nebheji buildup nokuti kunogona kukonzera mazino ako ave rakabuda ruvara.
Ramba chikwesheso stowed kure nokuda kana muchidya zvihwitsi kana zvimwe zvihwitsi. Nokuti zvokudya izvi vanoomerera mazino chaizvo nyore, vanogona kukurudzira staining. Mushure kunakidzwa zvihwitsi, kukwesha kwemaminitsi maviri kana matatu. Haufaniri kuva mushonga wemazino, chero kusuka mazino zvakanaka uye sukurudza zvakawanda nemvura.
Organic mafuta kokonati inogona kushandiswa kukuru zviitwe mumiririri nokuda teeth.If yako uchishandisa mafuta womukokonati somunhu mouthwash, zvinogona kuzvichenesa zvikadaro mazino ako pamusoro 10 maminitsi pazuva. Papera inenge 10 maminitsi, sukurudza muromo wako uye bhurasho sezvo imi raizodai. Unogona kuona humwe kunoguma isingasviki mashoma.
Kukwesha mazino ako pashure ose kudya kuchabatsira kuti varambe vakasununguka kubva discoloring. Izvi zvinokosha kana uri kunwa kofi.
An makemikari mafuta womukokonati kungava chete tikiti kuti rakanga rachena mazino ako. Kupa mazino enyu 10 yemaminitsi zuva sukurudza mumafuta womukokonati kunogona kuva nemigumisiro zvikuru pamusoro yakachenesesa pakati kunyemwerera KWAKO. pashure 10 maminitsi apfuura, sukurudza muromo wako uye kuchenesa mazino ako akafanana dzose. Unofanira kuona dzimwe mhinduro pashure pemazuva mashoma.
chiremba wemazino Your anogona kukuudza musha mazino zvakanakisisa izvo pasina kukuvadza enamel kana matadza.
Kukwesha mazino enyu nguva dzose kana uine kunyemwerera huru. Food nezvimwe zvinhu anogona kuvaka pamusoro mazino ako uye chidodzi navo. hamungambovi kuti neshungu pamusoro zino discoloration kana nguva kukwesha mazino enyu.
Mvura kunokosha mudziyo mukurwisa echitema. Kunokubatsira zvose sukurudza kure mazino ako uyewo kudzivirira staining. Chinhu chakanaka utano tsika kuchengeta yenyu mvura mubhodhoro kukwira rimwe zuva, kunyanya pashure wadya.
Kuti tirambe mazino ako, kuenda wemazino nguva dzose nokuda yakachena uye cheki kumusoro kunotodiwa. Kuva dzose iguru nzira kuchengeta mazino ako chena. Unofanira kushanyira chiremba wemazino yako kanenge ose mitanhatu.
Kushandisa rakanga rachena mushonga wemazino ari nyore nzira yokuwana pearly iwayo mazino chena kuti wanga uchitsvaka. kuburikidza kukweshera, mushonga wemazino ichi rids pamusoro echitema uye nebheji. Kupfuuridza nguva, uchava meno chaipenya sezvo echitema vanotanga kunyangarika.
Rehydrogen peroxide havafanire yakachengeteka kurapwa nokuti rakanga rachena mazino. Hazvina kunaka uye zvinogona kukonzera mazino ako rakabuda ruvara; ungadawo anopedzisira meno maviri akasiyana yechitema. Dzivisa chero chigadzirwa ine rehydrogen peroxide.
Enamel ari rukoko zvicherwa pamusoro unodzivirira chicherwa rukoko inobatsira kudzivirira mudzi zvirwere uyewo zvimwe zvinhu zvinogona kukuvadza mazino. Vamwe zino rakanga rachena zvinogona kukanganisa mazino ako.
Kana iwe kukwesha uye floss mazino ako kaviri pazuva, zvimwe vane meno akachena kuenzaniswa avo kuti havaiti izvi kakawanda. Kushandisa nzira idzi achabvisa buildup pamusoro nebheji iyo discolors mazino ako. Kuti ipfungwa yakanaka kukwesha mazino enyu uye floss pashure wadya.
Uchava kuderedza kofi wako kuwana akachena smile.As zvakaoma sezvo izvi zvingava vanhu vazhinji, kofi ndiyo kukonzera mazino rakabuda ruvara uye yakasvibiswa. Edza kunwa chocolate hot pachinzvimbo kofi.
The Citrus muna remoni uye madota muto ungagona kuzvichenesa zvikadaro mazino ako zvinobudirira ndiyo anguva madzimai ngano. Ipfungwa yakanaka kugara zvachose kure nzira iyi yokurapa.
Unofanira kuziva kuti chero zviitwe mushonga chete inoshanda dzinongoitika mazino. Chero chakagadzirwa hukawanika, kusanganisira korona, Bonding, anodyara uye zvakadai haangazozikamwi akachinjwa ruvara. Kushandisa mazino whiteners zvingakonzera mazino basa, akadai korona, kumira kundorwa dzenyu mazino machena dzinongoitika.
Uchava noutano uye akachena meno ari zvinokosha rokutsvaira purogiramu nguva dzose mushonga wemazino uye flossing. Products ine kubikira pasoda dzinobudirira rokubvisa echitema sezvo imi floss uye flossing.
Citrus zvibereko zvinogona kuva asidhi yakawandisa teeth.You wenyu anofanira kudzivisa Citrus facial uyewo. The acids aine vane nhamo mazino ako. Munoda kudzivisa kudya zvokudya izvi usati akarara pasi usiku, nekuti vanokudzidzisai kazhinji kutambura kubva asidhi reflux, iro rinogona kukuvadza mazino ako.
Kana uchifarira rakanga rachena mazino enyu, taura kutanga chiremba wemazino yako. Rakanga rachena iwe mazino haisi nyore basa zvizorwa. Enda vanachiremba vemazino vako nguva dzose kuti vave nechokwadi mazino ako utano. Iva nechokwadi kutaura chiremba wemazino pamusoro mazino rakanga rachena poda.
Ita upfu kuburikidza vachikuya pamwe orenji rinokwatuka uye Bay mashizha. upfu Izvi zvinogona kushandiswa chikwesheso yako uye aikanganiswa.
Regai kuzvichenesa zvikadaro mazino ako kana uine zvisingagadziriswi mazino panyaya dzakaita cavities.Make nechokwadi kubvunza chiremba wemazino wako asati atanga musha upi rakanga rachena zvesangano akakodzera nokuti imi.
Regai kuvimba toothpastes kuti vanozviti ivo achakupai mazino akachena. Vakawanda chete kuzvichenesa zvikadaro zvishoma mazino ako, kana napaduku, asi iwe unogona kushandisa nezvimwewo kana uchida mazino machena. Kana ukaita kutenga rakanga rachena mushonga wemazino, kutenga imwe kuti rine kubikira pasoda, sezvo chaizvoizvo zvinogona kubatsira.
Sezvinotaurwa asati, kune vanhu vakawanda vakasiyana kuti vanoda kuva mazino machena. Nzira dzakasiyana-siyana dzinogona kushandiswa kuti rakanga rachena mazino ako uye kubvisa yero echitema. Meno ako anogona kuva chena sezvinobvira kana iwe kungoshandisa mashoko acho pano.
Categories: Home Based kuna kuzvichenesa zvikadaro Mazino Tags: Bright White Smile, Confident In Smile Your, nyemwerera, mazino machena